Sidee loo helaa fiisaha dalxiis ee Mareykanka? - ALinks
Fiisooyinka dalxiiska waxaa la siiyaa booqdayaasha doonaya inay u safraan waddan dalxiis ama inay arkaan indhaha. Fiisooyinkan waxay shaqeynayaan oo keliya waqti cayiman mana u oggolaanayaan soo booqdaha shisheeye inuu ganacsi sameeyo inta uu joogo waddanka. Nidaamka dalabka, shuruudaha u qalmitaanka, iyo dukumiintiyada lagama maarmaanka ah, dhinaca kale, way ku kala duwanaan doonaan waddan ilaa waddan.
Tilaabada 1: Buuxi Codsiga Visa-la'aanta Muhaajiriinta Elektaroniga ah (DS-160).
Talaabada 2: Samee lacag bixinta khidmadda dalabka fiisada.
Tallaabada 3: U isticmaal degelkan ballan si aad u samaysato. Si ballantaada loo habeeyo, waxaad u baahan doontaa macluumaadka soo socda:
lambarka ku yaal baasaboorkaaga
Lambarka ku yaal dhabarka rasiidka Visa Fee. (Haddii aad u baahan tahay caawimaad ku saabsan helitaanka lambarkan, guji halkan.)
Boggaaga ansaxinta DS-160 ee tobanka lambar (10) lambar barcode ah
Tallaabada 4: Taariikhda iyo waqtiga wareysiga fiisahaaga, aad safaaradda Mareykanka ama Qunsuliyadda. Waa inaad sidataa nuqul iskaan ah oo ah warqadda ballantaada, boggaaga xaqiijinta ee DS-160, hal sawir oo dhowaan ah, iyo dhammaan baasaboorrada hadda jira iyo kuwii hore.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa inaad qaadatid waxyaabaha soo socda, iyadoo kuxiran ujeedada safarkaaga:
Ardayda: Keen nuqullo fasalladaadii ugu dambaysay ee dugsiga, qoraalladii, iyo digrii / dibloome. Keen caddayn caawimaad dhaqaale qaab bayaanno bille ah, waraaqo dhigaal oo go'an, ama dukumentiyo kale.
Dadka waaweyn ee shaqeeya: Keen warqad shaqo oo aad ushaqeyso iyo waliba seddex bilood oo jeegaaga mushaharka ah.
Ganacsatada iyo maamulayaasha ganacsiga: Keen caddayn xaaladda shirkadda iyo mushaharkeeda.
Booqashada xubin qoyska ka mid ah: Nuqulada cadeymaha ehelkaaga ee darajada waa in la keenaa (tusaale, Green Card, shahaadada dhalashada, fiisada ansax ah, iwm).
B-1 / B-2 Visa Dalxiis:
Fiisaha B-1 / B-2 waa fiiso aan soogalooti ahayn oo u oggolaanaysa codsadaha inuu booqdo Mareykanka ganacsi ama dalxiis.
Fiisooyinka B waxay daboolayaan ku dhowaad dhammaan sababaha socdaalka ku-meel-gaarka ah, marka laga reebo safarka ardayda, oo ay ilaalinayaan fiisooyinka F-1. Fiisaha B-1 waxaa loogu talagalay safarada ganacsiga, halka fiisada B-2 loogu talagalay safarka, sida fasaxyada ama booqashooyinka qoyska.
Fiisada B1 / B2 waxay ku ansaxaysaa sababo badan awgood, oo ay ka mid yihiin ganacsi iyo dalxiis / socdaal ganacsi oo aan ku tageyn Mareykanka.
Ku safridda fiisaha B1 / B2 waxaa lagu sameyn karaa sababo kala duwan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn:
Gorgortanka heshiiska ama qabashada shirarka ganacsiga ayaa tusaale u ah howlaha ganacsiga.
Kaqeybgalka shir muhiim u ah shaqadiisa, waxbarashadiisa, ama ganacsi ganacsi oo hada socda
Daryeelka hantida qaraabada
Qaadashada fasax ama kaqeybgalka dhacdooyinka dalxiiska
Helitaanka daryeel caafimaad
Kaqeybgalka ama kaqeybgalka waxqabadyada sida riwaayadaha ama muxaadarooyinka, illaa iyo inta kaqeybgaleha aan lasiinin ama lasiinin dhibco.
Maxay yihiin dukumiintiyada looga baahan yahay fiisaha dalxiiska Mareykanka?
Dukumentiyada looga baahan yahay dal ku galka booqashada B2 ee ku sugan Mareykanka
Caddaynta lacagaha. Waraaqaha sheegaya sababta aad u rabto inaad u booqato Mareykanka.
Caymiska caymiska oo kugu filan.
Faahfaahin ku saabsan cidda aad la noolaan doonto iyo halka aad joogi doontid
Caddayn inaad rabto inaad ku noqoto wadankiina hooyo.
Immisa dheelitir bangi ayaa looga baahan yahay fiisaha dalxiiska Mareykanka?
Ma jiraan shuruudaha ugu yar ee dheelitirka xisaabtaada bangiga, laakiin ku saleysan khibrad shaqsiyeed, meel kasta oo u dhexeysa $ 5 iyo $ 10K ayaa ku habboon.
Fiisaha dalxiiska Mareykanka ma ku adag tahay in la helo?
In kasta oo nidaamka dalabka fiisaha dalxiis ee B-2 uu yahay mid fudud, haddana dawladda Mareykanku ma rabto in tani ay u noqoto waddo guud oo ay ku soo galaan dadka doonaya inay shaqeeyaan (taas oo mamnuuc ka ah dadka haysta fiisaha B-2) ama sii joogaya kuna noolaanaya gudaha Mareykanka muddo dheer.
Waa imisa fiisaha dalxiis ee Mareykanka?
Foomamka fiisaha muhaajiriinta ee ugu caansan waxay leeyihiin lacag dalab ah US $ 160. Dalxiis, shirkad, arday, iyo fiisooyinka isdhaafsiga ayaa dhamaantood lagu daray. Inta badan fiisooyinka ku saleysan codsiyada US $ 190, sida shaqada iyo fiisooyinka diinta.
Mudo intee le'eg ayaan ku joogi karaa Mareykanka fiisada dalxiiska?
Dalxiisayaasha leh Visa Dalxiis B1 / B2 ayaa loo oggol yahay inay ku sii nagaadaan Mareykanka 180 maalmood halkii gelitaan. Maskaxda ku hay in aan laguu oggolayn inaad shaqo raadsato.
sida loo helo fiisaha dalxiiska ee usa
Waxaa laga yaabaa 17, 2021
Meelaha ugufiican ee lagu booqdo Mareykanka Mareykanka